musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » Bhuka uye Kufamba uine Ruvimbo kuSandals Resorts
Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • Bahamas Kuputsa Nhau • Bharabhasi Kuputsa Nhau • Kuvhuna Grenada Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Jamaica Nhau • Kuvhuna Saint Lucia Nhau • Caribbean • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Sandals Resorts - zororo risina kunetseka
Kunyangwe vaenzi vakatogarira kugara kune chero ipi yeanodakadza maSandals Resorts, kana kana vangangove-vafambi vari kungo funga nezvazvo izvozvi, paSandals chiitiko chezororo icho chezororo risinganetse.
Sandals Resorts inoratidzira akanakisa maitiro uye marongero akagadzirirwa kuisa pfungwa dzevaenzi mukusununguka.
Kunyangwe kuri kubhuka kuripo kana kuti kuchakurumidza kuitwa, vashanyi vanogona kuva nechokwadi chekuti maSandals akavhara.
Kubva pane inishuwarenzi yekuchengetedza yekufamba kuenda kunzvimbo yemahara kukanzura kusvika kune utsanana uye nezvimwe, Sandals yakafunga nezve zvese zvinhu zvezororo risinganetseke.
Kufamba Kudzivirirwa Chirongwa Inishuwarenzi iri Kwatiri!
Kubatsira kuchengetedza zvaunoda ndiko Kukosha Kwedu! Kuzivisa yedu nyowani Kufamba Kudzivirirwa Chirongwa. Iwe nevako vaunoda munogona kuona paradhiso muchiziva zvese zvakachengetwa zvino kusvika Nyamavhuvhu 31, 2021 zvekufamba kusvika Zvita 31, 2022 muchango gamuchira mari yeinishuwarenzi yezvekurapa panguva yekugara kwako uye inosanganisira mabhenefiti akati wandei paunenge usipo. Zvakanakisisa pane zvese, zviri patiri, zvakatengwa panzvimbo yako uye chikamu chekuchengetedza kwako kweSandals.
Yemahara Kamuri Kanzura Uye Tora 100% Kudzoserwa
Kanzuru yemahara kukanzurwa kwekuchengetedzwa kwakamiswa mazuva makumi matatu nemasere kana kupfuura vasati vatarisa zuva (kunze kweOver-The-Water Suites). Izvi zvinongoshanda chete kune yepasi / yekamuri chikamu chebhuku. Kukanzurwa kwendege kunoenderana nezvirango nevatakuri vendege.
Platinum Protocol YeUtsanana
Kuwedzera protocol uye hunovimbiswa hutsanana zviyero kuona yakawedzera hutano uye chengetedzo matanho e vashanyi vanotsvaga rugare rwepfungwa muCaribbean.
US / Canada Kupindazve Kunodikanwa COVID-19 Bvunzo Yemahara Pane Resort
Kwese kuenda kuUS neCanada kunofanirwa kutora bvunzo ye COVID-19 yekupindazve. Kuti uve nechokwadi chekuti izvi ndezvekusavhiringidza kuzororo rako, isu takaronga kugona kwako kuti uve nerumbidzo yekuongorora kweECOVID-19 antigen yevagari vemuUS uye PCR kuyedza kwevagari vemuCanada chaimo mukunyaradzwa kwenzvimbo yako. Miedzo ichaitwa nevakatenderwa uye vanodzidziswa vezvekurapa vane hunyanzvi hwepamusoro uye zvishoma zvinokanganisa kune yako yakazara zororo ruzivo. Izvi zvichaitwa mukati maawa makumi manomwe nemaviri usati waenda uye mhinduro dzako dzichawanikwa mukati maawa 72-24.